Ammaanka Garoowe oo la adkeeyay, - Awdinle Online
Ammaanka Garoowe oo la adkeeyay,
March 14, 2020 (Awdinle Online) –Magaalada Garoowe ee xarunta Dowlad Goboleedka Puntland waxaa ku sugan wufuud kala duwan oo ka qaybgaleysa shirka uu iclaamiyaya Madaxweynaha Maamulkaas Siciid Cabdullaahi Deni.
Xubnaha Garoowe jooga waxaa kamid ah: Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole iyo Cabdiwali Maxamed Cali Gaas oo labaduba xilka Madaxweynaha Puntland kaga horeeyay SIciid Cabdullaahi Deni.
Sidoo kale waxaa Magaalada Garoowe saacadihii lasoo dhaafay tagay Xildhibaanno iyo Wasiiro katirsan Xukuumadda Soomaaliya oo deegaan doorashadoodu tahay Puntland, Siyaasiyiin, Xubno xilal kala duwan kasoo qabtay Dowladihii dalka soo maray iyo Puntland.
Odoyaasha dhaqanka ayaa qayb ka ah kulankaan, waxaana Ujeedka Shirka uu yahay sidii ay isku weydiin lahaayeen heerka maanta uu joogo Maamulka Puntland, marka lala barbar dhigo isbadalka Siyaasadda iyo qaadashada dalka ee nidaamka federaalka.
Ammaanka Magaalada Garoowe ayaa aad loo adkeeyay, waxaana maanta dhameystirmaya xubnaha ka maqan Magaaladaas oo qaarkood la sheegay in dalka dibadiisa ay ka tagayaan si ay u xaadiraan gogasha.
Taliyaha Ciidamada Booliiska Gobolka Nugaal ayaa ciidamada amray in ay adkeeyaan ammaanka, waxaana ay sameysteen baro kontorool oo cusub, halka gaadiidka loo diidayo waddooyinka qaar.
Wasiirka arrimaha dibada Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay mowqifka madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisul wasaare Kheyre ee shirka wada-tashiga Puntland ee furmaya 15-ka March.
Cawad oo hoggaaminaya Wasiiro iyo Xildhibaano ka soo jeeda Puntland ayaa shalay gaaray magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, si ay uga qeyb galaan shirkaas.
Isaga oo hadlayey kadib markii uu gaaray Garoowe, ayaa Axmed Ciise Cawad waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo iyo ra’iisal wasaare Kheyre aysan wax dhibaato ah ku qabin shirkaas, islamarkaana ay bogaadin usoo direen shacabka Puntland ayna guul u rajeeyeen shirka wada-tashiga, sida uu yiri.
Wasiirka ayaa intaas ku daray inay Puntland marti qaaday wakiilada u matala dowladda federalka Soomaaliya si ay shirkaan kaalin uga qaataan.
Xaaladda siyaasadeed ee DFS iyo Dowlad Goboleedka Puntland ayaan wanaagsaneen, waxaana qorshaha uu yahay in Xildhibaanada labada Gole iyo Wasiirada Dowladda Federaalka in ay Madaxweyne Deni ay kala hadlaan sidii labada dhinac la isugu soo dhaweyn lahaa.
Previous articleWasiir Cawad: Farmaajo iyo Kheyre waxay guul u rajeeyeen shirka wadatashiga Puntland
Next articleSaakay oo Muqdisho. lagu dilay Wade Mooto Bajaaj